News - Karen Women's Organisation (KWO) - Page 2
On the occasion of KWO’s 33rd anniversary, April 5, 2018, we celebrate our successes while also looking at our challenges ahead and how to overcome them. KWO will have it’s largest […] Read more
KWO is excited to announce the formation ofanewanew “Karen Grassroots Women’s Network” which will strengthen the voice of Karen women in advocacy efforts. KWO gathered women from […] Read more
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=zSw2SBIy30g&w=560&h=315] KESAN Channel Published on Jun 20, 2017 ဇွန်လ ၂ဝ ရက်၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင်ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ကို လေးစားဂုဏ်ပြုလျက် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရက် (KPSN) ကလူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့မှုအထောက်အပံ့လျှော့ချမှုကိုကြုံတွေ့ရပြီး လုံခြုံမှုမရှိသေးသည့် မိမိနေရပ်ဌာနေသို့ ပြန်ရန်တွန်းအားပေးခံနေရသည့်ဒုက္ခသည်များ၏လက်ရှိအခက်အခဲကို ဤရုပ်သံမှတ်တမ်းတိုတွင် တင်ပြထားသည်။ ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းနှစ်ခုဖြစ်သည့် မယ်လအူးနှင့်မယ်ရာမလွန်ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်း၌ရိုက်ကူးမေးမြန်းမှုများကို ပြုလုပ်ကာ ဤမှတ်တမ်းတိုလေးကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ Read more
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZMz7WykVD1o&w=560&h=315] Published on Jun 20, 2017 KESAN Channel To commemorate the World Refugee Day on 20th June 2017, standing together with refugees, the Karen Peace Support Network (KPSN) would […] Read more
Published on May 27, 2017 KESAN Channel On the day of the 2nd Panglong Union Peace Conference is taking place in Nay Pyi Taw, the displaced Karen people […] Read more